စိန်စီနန်း က ချစ်ဇာတ်လမ်း – စ/ဆုံး – Grab Love Story
စိန်စီနန်း က ချစ်ဇာတ်လမ်း – စ/ဆုံး
“ဦးဇေယျာလင်း ရပါပီခင်ဗျာ တသိန်းငါးသောင်း ရေကြည့်ပါဦးဗျ သုံးလပြည့်ရင် ရွေးပါ မရွေးဖြစ်လဲ အတိုးသတ်ပေးပါခင်ဗျာ”
“ဟေ့ယောင် ဒီဒေါ်တင်တင်ဦးက ဘာလဲ ရွေးတာလား”
“သားကလည်း ဒီမှာ ဟင်းချက်နေတာကို သားဖာသားကြည့်လေကွယ်”
“ဟင်း ကြည့်ရတာ မျက်စိလည်ပါတယ်ဆိုမှ”
“လူဆိုးလေး မေမေနဲ့ ဖေဖေမရှိရင် မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
စည်သူစိုးက ဒီတိုင်းပင် စိတ်မပါ၍ မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုက ဓားထောက်လုပ်ခိုင်းတောင် အသေသာခံမည် မလုပ်ရေးချာမလုပ်။ စိတ်ဝင်တစား လုပ်ပီဆိုလျှင်လည်း အသေခံကာ လုပ်မည့်လူစား။
ယခုလည်း ဆိုင်ထိုင်ချင်သည်ဆို၍ ထိုင်သည်။ အားလုံး အကုန်ပတ်မလုံးစုံလုပ်တတ်သည်။ ပစ္စည်းရွေးသူလာလျှင် ပစ္စည်းရှာတတ်သည်။ သို့သော် မိခင်ဖြစ်သူရှိလျှင် မလုပ်ပဲ နွဲ့ဆိုးဆိုးတတ်သည်။
သူ့နာမည်က စည်သူစိုး။ အဖေက ဦးဝင်းမောင် ကားအရောင်းအဝယ်လုပ်ကာ အမေက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး အိမ်နှင့်တွဲကာ အမိန့်ရ အပေါင်ဆိုင် ဖွင့်ထားလေသည်။ အတိုးနှုန်း သက်သာခြင်း၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှန်ကန်ခြင်း၊ ပေါင်နှံသူများအပေါ် သက်ညှာခြင်းတို့ကြောင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ စိန်စီနန်း အပေါင်ဆိုင်သည် နာမည်ရကာ လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်လေသည်။ အကူ အလုပ်သမား၂ယောက် ခေါ်ထားရလေသည်။
စည်သူစိုးကား အသက်၂၃နှစ်ခန့်ရှိ ဘွဲ့ရ လူငယ် တယောက်ဖြစ်ကာ အပျော်အပါးမမက်ပဲ အလုပ်စိတ်ဝင်စားသော အနေအထိုင် ကျစ်လစ်လိမ္မာသူတယောက်ဖြစ်လေသည်။ အဖေလုပ်သူက သားဖြစ်သူ ကားဝယ်\_ရောင်းလုပ်စေချင်သော်လည်း သူက တတ်သိနားလည်ရုံ လုပ်တတ်ရုံသာ သင်ထားလေသည်။ သူတကယ် လုပ်ချင်သည်ကား အမေရဲ့ အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်း။ အပေါင်ဆိုင်ကား လူတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံးပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ဟုသူကယူဆလေသည်။
နံနက်၆နာရီ သားမိ သားဖ ၃ယောက်လုံးထကာ Gymသွားဆော့ပီးမှ ရေချိုးကာ မနက်စာစားလေ့ရှိသည်။ ပီးနောက် ၉နာရီအချိန်တွင် ဦးဝင်းမောင်က ကားပွဲစားတန်းသို့ သွားကာ စည်သူစိုးနှင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက ဆိုင်ဖွင့်လေသည်။
ပိုက်ဆံရှိ လူချမ်းသာစာရင်းဝင်သော်လည်း ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက အိမ်မှုကိစ္စကို သူတယောက်ထဲသာ နိုင်အောင်လုပ်လေသည်။ မနက်တပိုင်းလုံး စည်သူစိုးက ဆိုင်ထိုင်ကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက အိမ်မှုကိစ္စဗာဟီရနှင့် မီးဖိုချောင် ထမင်းဟင်းချက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်လေသည်။ ချက်ပြုတ်ပီးစီးသည့်အခါ ဆိုင်ခနဝင်ကြည့်၍ ဦးဝင်းမောင်ထမင်းစားပြန်လာသည့်အခါ သားမိ သားဖ ၃ယောက် ထမင်းလက်ဆုံစားလေ့ရှိကြသည်။ နေ့လည်ပိုင်း ဦးဝင်းမောင် ကားပွဲစားတန်းသွားသည့်အခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက ဆိုင်ထိုင်၍ စည်သူစိုးက အပြင်အလုပ်များရှိက ထိုအချိန်တွင် ထွက်လုပ်လေသည်။
ညနေ၅နာရီတွင် ဆိုင်ပိတ်ကာ ဦးဝင်းမောင်လည်း ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်လေသည်။ ၆နာရီတွင် ညစာစားကြ၍ ညစာစားပီးသော် စည်သူစိုးက ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်လည်းကြည့် မကြည့်ပါကဂိမ်းဆော့ချင်လည်းဆော့ စာဖတ်ချင်လည်းဖတ်ကာ သို့မဟုတ်ပါက သူငယ်ချင်းများဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်ထိုင်တတ်လေသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားသည့်အခေါက်မှာ ဆယ်ခါ့ တစ်ခါဖြစ်လေသည်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ည၉နာရီထိုးလျှင် စည်သူစိုး အိမ်အရောက်ပြန်လာရလေသည်။ ည၉နာရီဆိုလျှင် အိမ်တံခါးပိတ်ကာ အိပ်ယာဝင်ကြပြီဖြစ်သည်။ စည်သူစိုးတို့၏ နေ့စဉ် နိဓ္ဓဓူဝ လုပ်ငန်းစဉ် ဇယားဖြစ်လေသည်။
သို့သော် ကံကြမ္မာဇာတ်ဆရာဟူသည် အလှည့်မပြောင်း အချိုးအကွေ့များဖြင့် လောကီလူ့ဘဝကို တန်ဆာဆင်ခြယ်မှုန်းသော အလေ့အထရှိသည့်အတိုင်း စည်သူစိုး၏ဘဝကို တန်ဆာဆင်ခြယ်မှုန်းခဲ့လေသည်။
ညသန်းခေါင်ယံ မရောက်တရောက်အချိန် စည်သူစိုး ဆီးတအားအောင့်သဖြင့် လန့်နိုးလာလေသည်။ ညဦးပိုင်းက ရေအများကြီးသောက်မိလိုက်တာကို သတိရလေသည်။ အိမ်သာသွားရန် ထကာအခန်းထဲမှထွက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်သာသွားပီး အပြန် အဖေတို့ အခန်းရှေ့မှ အဖြတ်တွင် စကားသံများ ကြားလိုက်ရလေသည်။ ဒီချိန်ကြီး ဘာများ အရေးတကြီးပြောနေသလဲဟု စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် အခန်းတံခါး အသာဟကာ နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့…
“မောင်ကကွာ ဆေးသောက်တာတောင်မှ မရဘူးကွာ”
“ဟာ ဖူးကလည်း ကိုယ်လဲ ဆေးသောက်တာပဲကွာ အချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့”
“တော်စမ်းပါ မောင်သာအစကထဲက ဆင်ခြင်နေရင်ဘာမှမဖြစ်ဖူး အဲ့ဆေးလိပ်တွေမသောက်ပါနဲ့လို့ အစောကြီးကထဲက ပြောသားပဲ တရုတ်ဆေးလိပ်ကမှ ကောင်းတာဆိုပီး နားမထောင်ပဲ သောက်တာလေ”
“ဒီလောက်ထိဖြစ်မယ်မှန်း မောင်လဲမထင်မိလို့ပါကွယ် ဆရာဝန်ကတော့ လုံးဝ ပန်းသေတာ မဟုတ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်လေ ဖူးရဲ့”
“မျှော်လင့်နေတာကလည်း ၆လတောင်ရှိနေပီ ဘယ်တော့မှ ပြန်ကောင်းမှာလည်း ဖူးလဲသွေးသားနဲ့ပါမောင်ရယ် ဖူးလေ တခါတလေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်မိတယ် မောင်”
“အေးပါမောင်ကြိုးစားပါ့မယ်ကွာ ခုတော့ ဒီအတုလေးနဲ့ ပြုစုပီးတာလေးပဲကျေနပ်လိုက်ပါကွာ”
“ဟင်း ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုချည်းပဲ ဖယ် ရေသွားဆေးဦးမယ်”
ဟုဆိုကာ ထွက်လာသော မိခင်ဖြစ်သူ မြင်မှာစိုး၍ မှောင်ရိပ်တွင် အသာလေး ကွယ်နေလိုက်ရလေသည်။
စည်သူစိုး သိလိုက်ရသော အဖြစ်အပျက်များ အပေါ် စိတ်ရှုပ်သွားမိလေသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်း အပြစ်မတင်ရက် မိခင်ကိုလည်း မည်သို့ ကူညီရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်လေသည်။
နောက်နေ့ မနက်မှစ၍ စည်သူစိုးသည် မိခင်ဖြစ်သူအား သတိထားစောင့်ကြည့်မိလေသည်။
အကူခေါ်ထားသော ကောင်လေးများ ဖြစ်သော အောင်မင်းနှင့် သိန်းစိုးတို့ ၂ယောက်မှ သိန်းစိုးအား လိုတာထက်ပို၍ အရောတဝင်နေနေကြောင်း တွေ့ရလေသည်။ စည်သူစိုးမှာ ပို၍ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်မိလေသည်။
သိန်စိုးကား သူနှင့်ရွယ်တူဖြစ်ကာ သူလိုပင် အသားဖြူ ဖြူ မေးရိုးခိုင်ခိုင် နှာတံပေါ်ပေါ် နှင့် သွယ်လျလျ ကိုယ်ဟန်ရှိလေသည်။ ခါးသိမ်သိမ် တင်ပါးကျစ်ကျစ်နှင့် တောင့်တင်းသောပါင်တံများက အလိုးအဆောင်းကောင်းသော ယောက်ျားကောင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသော လက္ခဏာများဖြစ်လေသည်။
မိခင်ဖြစ်သူ ဘယ်ခြေလှမ်း လှမ်းတော့မည်ဆိုတာ သိနေသော စည်သူစိုးသည် မည်ကဲ့သို့ တားဆီးရမည်ကို အကြံအိုက်လျက်ရှိလေသည်။
ဆိုင်သိမ်း ညစာစားပီးသောအခါ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။
“ဟေ့ စည်သူ ပျောက်လှချေလား ခုမှပေါ်လာတယ် ဘာသောက်မှာလဲ ညီးလေးရေ မှာမယ်ဟေ့”
“ညီလေး Speed တဘူးယူခဲ့ သံဘူးနော်”
“ကိုစိုးမိုး မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပီဗျာ”
“မင်းက လာမှမလာပဲကိုး မင်း ဇက်ပြာဖွင့်လိုက် စာအုပ်အသစ်တွေ ဒေါင်းထားတာရှိတယ် ကူးသွားတော့ မင်းလဲ Facebook သုံးပါဆိုတာကို ပြောရမဘူးကွာ”
“ကျနော်က စွဲမိရင် နေ့ရောညပါ သုံးမိမှာ ဒါကြောင့်ပါ ကိုစိုးမိုးရ”
“အေးပါကွာ စည်သူ မင်းကြည့်ရတာ သိပ်မလန်းဘူးကွာ ဘာတွေညစ်နေလဲ”
“ဘော်ဒါ တယောက်ပါဗျာ ပန်းသေသလိုဖြစ်နေတာ ၆လလောက်ရှိပီဗျာ ဘယ်လိုကူညီရမလဲစဉ်းစားနေတာ”
“မင်းကတော့ကွာ ဘယ်သူ့မဆို ကူညီချင်တဲ့ကောင်ပဲကွာ ငါသိသလောက်ပြောမယ်ဆို အဲ့ဒါမျိုးက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာကွ ဘာတွေလုပ်မိလဲဆိုတာသိမှ ကုသရလွယ်တာကွ”
“တရုတ်ဆေးလိပ် ပိန်ပ်ိန်လေးတွေလေ ပူရှိန်းဆေးလိပ်တွေသောက်တာအကိုရဲ့”
“အင်း ဒီခွေးတရုတ်တွေက သူတို့ဆီလူများတိုင်း လျော့ချဖို့ဆိုပီး သေချာ ပန်းသေတဲ့ ဆေးတွေရောပီးထုတ်တာ ခွေးမျိုးတွေ လူကို ဥပါဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ မင်းဘော်ဒါကို တတ်နိုင်ရင် လုံးဝ ဆေးလိပ်ဖြတ် ခိုင်းလိုက် ဆေးရွက်ကြီးက ပန်းသေစေပါတယ်ဆို ခွေးမျိုးတွေ ထုတ်တဲ့ဟာမှ သွားသောက်တော့ပိုဆိုးမှာပေါ့”
“ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရာ သူကလဲ တနေ့ ဆယ်လိပ်လောက်သောက်တာ”
“မသောက်ပလေ့စေနဲ့ အိပ်ရေးဝဝအိပ် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မီးဖုတ်တို့ ရွှေနီငှက်ပျောသီးတို့စားပေး စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်နေ စိုးရိမ်စိတ်မဝင်အောင်နေ အဲ့ဒါဆို ပြန်ကောင်းလာမှာပါကွ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုကြီး ခုလိုရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါဗျာ”
“မလိုပါဘူးကွာ ဒါပေမဲ့ မင်းဘော်ဒါရဲ့ မိန်းမအတွက်တော့ စိုးရိမ်တယ်ကွာ မိန်းမတွေက လိင်မဆက်ဆံပဲနေနိုင်တာ သုံးလပဲကွ သုံးလကျော်ရင် သွေးသားဆန္ဒကိုက တောင်းလာတာ အဲ့ဒါကိုတော့ ဂရုတစိုက်ဖြေပေးပေါ့ သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြခိုင်းပေါ့”
စည်သူစိုး ခေါင်းထဲ အချက်ပေးခေါင်းလောင်သံများဆူညံသွားလေသည်။ သိန်းစိုးကို မိခင်ဖြစ်သူက ရေလာမြောင်းပေးနေပီ။ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဖခင်ဖြစ်သူကို ဘယ်လိုပြောပြရပါ့မလဲ မိမိသိသည်ဆိုလျှင်ကော ဖခင်ဖြစ်သူက ရှက်သွားလေမည်လား။ ကိုစိုးမိုး နောက်ဆုံးစကားက သူ့ကို ပိုပီးဖိအားများလာစေသည်။
ကိုစိုးမိုးဆိုတာက သူ့ သူငယ်ချင်းရဲ့အကို လက်ရှိ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ အပြာစာအုပ်များ မျှဝေပေးနေသောသူဖြစ်လေသည်။ သူက ဖေ့ဘုတ်မသုံး gmail လျှောက်ရုံဖြင့်မရ Code ပြန်ရိုက်ရ စိတ်မထင်လျှင် အကောင့်ပိတ်ခံရသော ဖေ့ဘုတ်ကို ဇယားရှုပ်သည်ဟု ထင်မြင်မိလေသည်။ အဲ့ဒီတော့ 18+စာအုပ်ကြိုက်သောသူ့အတွက် ကိုစိုးမိုးက PDFရှိသော စာအုပ်များ ဒေါင်ထားကာ သူလာလျှင် ကူးထဲ့ပေးလေ့ရှိလေသည်။စိတ်ပြေလက်ပျောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်လာကာမှ ပိုပီး စိတ်ညစ်လာသဖြင့် ကိုစိုးမိုးကို နှုတ်ဆက်ကာ ပြန်လာခဲ့လေသည်။
အိမ်သို့ပြန်ရောက်သော် စိတ်ညစ်စရာများမေ့ထားကာ ကိုစိုးမိုးပေးလိုက်သော Pdfများကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်လေသည်။ ၁၀ပုဒ်ခန့်ရှိလေသည်။
ပထမဆုံးဖတ်မိသည်က ထူးခြားရေးသား၍ တိတ်တခိုးမှ တင်ဆက်သည့် “အရေခြုံ” ဆိုသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ စဖတ်မိသည်မှစ၍ လက်ကမချချင်အောင်ကောင်းလွန်းကာ သွေးရင်းသားရင်း လိင်ဆက်ဆံသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ အကြိုက်ဆုံးကား ခိုင်လေးနှင့် သူ့သားဖိုက်သော နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်လေသည်။ ထိုအခန်းကို ၃ခါ ၄ခါလောက် ပြန်ဖတ်မိလေသည်။
နောက်ထပ်တအုပ် ဖတ်မိသောအခါ အကာမင်း ရေးသားသော “အမေနဲ့သားရဲ့ လက်ထပ်ပွဲ” စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ အဖေက ပြသနာရှိ၍ သားက အမေကို ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကာ သူနှင့်တူနေသည်ကိုလည်းသတိပြုမိလေသည်။
နောက်ထပ်တွေ့ရသည်ကား ကာမလူဆိုး ခေါ် ကိုစည် ရေးသားသော “ဟက်ပီးဗယ်လင်တိုင်းဒေး” ဆိုသော စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးအကြာင်းကို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ရေးသားထားလေသည်။
စည်သူစိုး စာအုပ်များဖတ်ပီးနောက် အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်သွားလေသည်။ လေပင်ချွန်လိုက်မိလေသည်။ Pdfပေးသော ကိုစိုးမိုးနဲ့ စာရေးဆရာအပေါင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပီး ကာမသိဒ္ဒိ၊ ပီယသိဒ္ဒိ၊ လာဘသိဒ္ဒိအပါအဝင် အလုံးစုံသော သိဒ္ဒိများရပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်မိလေသည်။ (ကျနော်လည်း တကယ် ဆုတောင်းပါတယ် ခိခိ / ပုံ – မြသာ)
ဝိုင်းစက်သောမျက်လုံးတစုံ ထူထဲသောနှုတ်ခမ်း ဖြောင့်စင်းသောနှာတံပေါ်ပေါ်တို့က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော စမိုင်းနှင့်ပုံစံတူကာ ကော့ချွန်နေသော ရင်သားများ စွင့်ကားဝိုင်းစက်ပြီး အနောက်ဖက်ကို ကောက်ထွက်နေသော တင်သားများသည် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှပတရားများကို ဖော်ပြနေသော အရာများဖြစ်လေသည်။ ထိုအလှတရားများကို အဖေ မသုံးဆောင်နိုင်ပါက သူသုံးဆောင်မည်ဖြစ်လေသည်။ အပြင်လူ ဘယ်သူ့လက်ကိုမှအပါမခံနိုင် ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိတ်ထဲသာဖိတ်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်မိလေသည်။
မနက်ဆိုင်ဖွင့်ပီးသောအခါ လူပါးသောအချိန်တွင် စည်သူစိုး အိမ်နောက်မီးဖိုချောင်သို့ အသာဝင်လာခဲ့လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ချက်ပြုတ်နေရာသို့ အသာနောက်မှ ဝင်ရပ်၍ တောင်အောင် အသင့်လုပ်ထားသော သူ့လီးကြီးဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဖင်ကြားသို့ချိန်ကာ ထောက်၍ သိုင်းဖက်လိုက်လေသည်။
“အိုဟဲ့ ဒီကလေးဟာလေ အလန့်တကြား လွှတ်လေကွယ်”
“လွှတ်ဘူး သားမေးတာ မဖြေရင်လွှတ်ဘူး”
စည်သူစိုးသည် ရံဖန်ရံခါ ထိုကဲ့သို့ကပ်ချွဲနေကြ။ သို့သော် ယခုကား ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အစပထမလန့်သွားသော်လည်း မိမိဖင်ကြားသို့ အမြှောင်းလိုက်ထောက်လာသော သားဖြစ်သူ၏တောင်နေသာ လီးကြီးကို သတိထားမိသောအခါ ရင်ထဲဝယ် တဒိန်းဒိန်းတုန်လှုပ်သွားလေသည်။ ၆လကြော်တောင့်တနေသော သွေးသားတို့က ဖိုသဘာဝအထိအတွေ့ကို ရရှိသဖြင့် လှုပ်ရှားစပြုလာသလို ဦးနှောက်အသိစိတ်ကလည်း မသင့်တော်ကြောင်းအသိဝင်လာသည်နှင့် ရုန်းထွက်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးက အသာလွှတ်ပေးကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားသောအခါမှ ခါးကနေကိုင်၍ အသာစွဲကပ်ကာ ဖက်ထားလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုး၏ လီးနှင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ စောက်ပတ်ကား ကွက်တိထပ်တူကျကာ ဖိကပ်မိလေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးကား စောက်ပတ်ထဲမှလည်းဆစ်ခနဲ့ အရေများစိမ့်လာလေသည်။ ထို့ပြင်စည်သူစိုးကား ဒီတိုင်းအငြိမ်မနေ မျက်နှာအနှံ့ ငြင်သာစွာ နမ်းရှိုက်လာသောအခါ အထိအတွေ့ကို ယစ်မူးသာယာလာလေသည်။ ပျောက်လုနီးနီးဖြစ်နေသော အသိစိတ်ကို ပြန်ထိန်းကာ ရုန်းထွက်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးကား ပြန်မလွှတ်သေးပဲ…
“ဟင်း မေမေကလည်း သားကချစ်လို့နမ်းတာကို”
ဟုဆိုကာ အမြှောင်းလိုက်ကပ်နေသော သူ့လီးနှင့် စောက်ဖုတ်ကို အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲပေးလေသည်။ မသိစိတ်ကသာယာပီး ရမက်သွေးသားတို့က ကြိုက်နှစ်သက်နေသော်လည်း အသိစိတ်က ကောင်းကောင်း သတိရှိနေသည့် ဒီတခါတော့ သတိတရဖြင့်ငြင်းဆန်ကာ…
ဟုဆိုကာ အတင်းရုန်းထွက်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးကလည်းလွှတ်ပေးလိုက်လေသည်။
“ကြက်သားပြုတ်ကြော် မုံလာဥလချဉ်ရည်ဟင်း ငရုပ်သီးထောင်း ဒါပဲလေ သွားတော့ လူက အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ဟာကို ဆိုင်ကောင်းကောင်းမကြည့်ဘူး”
“သိချင်လို့မေးတာကိုး မေမေက ဒီတိုင်းပဲ သွားပီ”
အပေါ်စီးက ဖိဟောက်ကာ မောင်းထုတ်လိုက်လေသည်။ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေသော ရင်ဘတ်ကိုဖိရင်း ခြေတုန်လက်တုန် စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေကိုယူသောက်လိုက်ရလေသည်။ လာထောက်ထားသည့် စည်သူစိုး လီးကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ် သူအဖေထက်ပင်ကြီးလိမ့်မည်ဖြစ်လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးဟု အများက ဒေါ်တပ်ခေါ်နေကြသော်လည်း တကယ်တန်း အသက်အားဖြင့် လေးဆယ်ကျော်ရုံလေးသာရှိလေသည်။ သူရဲ့ ဝိုင်းစက်သောမျက်လုံးတစုံ ထူထဲသောနှုတ်ခမ်း ဖြောင့်စင်းသောနှာတံပေါ်ပေါ်တို့က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော စမိုင်းနှင့်ပုံစံတူကာ ကော့ချွန်နေသော ရင်သားများ စွင့်ကားဝိုင်းစက်ပြီး အနောက်ဖက်ကို ကောက်ထွက်နေသော တင်သားများကြောင့် တက္ကသိုလ်တုန်းကထဲက လူသိများခဲ့သူဖြစ်လေသည်။ သို့သော် မိဘများ၏ အုပ်ထိန်းမှုကောင်းခြင်းကြောင့် ရည်းစားသနာ မထားဖူးပေ။ ကျောင်းပီးပီးချင်းမှာပင် သူ့ထက် ဆယ်ငါးနှစ်ခန့်ကြီးသော ဦးဝင်းမောင်နှင့် လူကြီးချင်းသဘောတူကာ ပေးစားခဲ့လေသည်။
ဦးဝင်းမောင်က အသက်သာကြီးသော်လည်း ခေတ်မှီ ပွင့်လင်းကာ လူငယ်ဆန်သူဖြစ်လေသည်။ ငယ်စဉ်ကထဲက အားကစားကို ဂရုတစိုက်လုပ်လေ့ရှိသူဖြစ်လေသည်။ ဝင့်ဝင့်ဖူးနှင့်ရသောအခါတွင်လည်း ဝင့်ဝင့်ဖူးကိုပါ အားကစားလုပ်စေလေသည်။ လိင်ဆက်ဆံရာတွင်လည်း တလမ်းသွားရိုးရိုးမဟုတ်ပဲ ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်ဆံလေ့ရှိလေသည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ ဘာမှန်းကောင်းကောင်းမသိသော ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် ဦးဝင်းမောင်နှင့်တွေ့မှ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားရပီး ကာမဗေဒပညာရပ်တွင် တော်တော်များများ သိရှိနားလည်လာလေသည်။ သို့သော် ဦးဝင်းမောင်သည် ဆေးလိပ်ကို မကောင်းမှန်းသိသိဖြင့် နှစ်သက်စွာ သောက်သုံးလေသည်။ ရိုးရိုးစီးကရက်မှ တဆင့် တရုတ်ဆေးလိပ်ဖြစ်သော စီးရက်ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်လေးများကို ပြောင်းသောက်လေသည်။ အဆိုပါ စီးကရက်များတွင် ပရုပ်ပါသဖြင့် ပူရှိန်သောအရသာပါရလေသည်။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမှာ ဦးဝင်းမောင်တယောက် ပန်းညိုးလာခြင်းဖြစ်လေသည်။ အစပထမ၌ တာတာနာဖီးလ်ပါဝင်သော ယောက်ျားအားဆေးများ သုံးစွဲရာ အဆင်ပြေမှုရှိသော်လည်း ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှု မလျော့သောအခါ လုံးဝ ပန်းသေသလိုဖြစ်သွားလေသည်။
ဆရာဝန်နှင့်ပြသရာတွင် ထိုအချိန်မှ ဦးဝင်းမောင်မှာ ဆေးလိပ်ကို လျော့သောက်ရင်းဖြတ်လေသည်။ လုံးဝပန်းသေသလိုဖြစ်သည်မှာ ခြောက်လခန့်ရှိပီဖြစ်ပီး ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ လိင်မဆက်ဆံရသည်မှာ ခြောက်လခန့်ရှိပီဖြစ်လေသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ အသာပြေစေရန် လီးတုနဲ့ ထဲ့ပေးပါသော်လည်း အစစ်လောက် မကောင်း ဆန္ဒရမက်ကို မပြေပျောက်စေနိုင်ကြောင်း ဝင့်ဝင့်ဖူးသာလျှင် ခံစားသိရှိပေသည်။
အခု ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသိနှင့် ဆန္ဒလွန်ဆွဲနေမှုကို အလူးအလဲခံစားနေရလေသည်။ သားဖြစ်သူ စည်သူစိုး၏ အထောက် အပွတ်များတွင် သာယာစိတ်ကတဖက် လူ့ဘောင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော သားနှင့်မအေ ကာမဆက်ဆံသော ဖောက်ပြန်မှုကြီးကို ကျူးလွန်ရန်မသင့်ဟူသော အသိတရားတို့ကတဖက် လွန်ဆွဲနေလေသည်။
ထိုကဲ့သို့လွန်ဆွဲကာ မသင့်တော်ဟု ကိုယ့်ကို ကိုယ်သတိပေးထိန်းချုပ်ပါသော်လည်း သွေးသားဆန္ဒဟူသည်ကား ထိန်းလေ လွတ်လေဖြစ်သော သဘာဝအတိုင်း ထူးခြားသော လိုလားတောင့်တခြင်း တမျိုးကလဲ ပေါက်ဖွားလာလေသည်။
ခိုးစားရသော အသီးက ပိုချိုသည်ဆိုသည့်အတိုင်း လူလောက အဖြူ ရောင်စည်းလေးကို ပါးပါးလေးဖြတ်ကျော်ကာ သားဖြစ်သူနှင့် ချစ်ပွဲဝင်ကြည့်လျှင် ကြုံတွေ့ရမည့် အပြာရောင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပျော်ရွင်မှု အထိအတွေ့ အရသာများ စိတ်ကျေနပ်စရာ ပြီးဆုံးမှု ခံစားချက်များကို တွေ့ကြုံခံစားလိုသော တောင့်တမှု ချဉ်ခြင်းလဲတက်လာလေသည်။
အစက ဒီလိုဘာလို့လုပ်သလဲ။ သူ့အဖေပန်းသေနေတာကို သိသွားလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မိမိက သိန်းစိုးကို ရေလာမြောင်းပေးနေတာကိုသိသွားသလား။ ဒါမှမဟုတ် တကယ်ပဲမိမိကို ၅၂၈ထက်ပိုပီးချစ်လို့လား ဆိုသော အတွေးများဖြင့် စဉ်းစားခန်းဝင်မိသော်လည်း သွေးသား တောင်းဆိုမှုယင်းကပ်လာချိန်တွင် အပြာရောင်စိတ်ကူးများကလွဲ၍ ကျန်တာ အတွေးထဲ မဝင်တော့ချေ။
ထိုနေ့တနေ့လုံး ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် စည်သူစိုးကိုရှောင်နေတော့လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အလုပ်ကိုလုပ်နေရသော်လည်း စိတ်က သားဖြစ်သူ စည်သူစိုး အကြောင်းသာတွေးနေမိလေသည်။ စည်သူစိုး ထပ်လာမည်လားဟု မျှော်မိသော်လည်း စည်သူစိုးကို မတွေ့ရတော့ပေ။
ဦးဝင်းမောင်လည်း ထမင်းစား ပြန်ရောက်လာလေသည်။ ဒီတခါတွင်တော့ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် စည်သူစိုးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည်ကို အပျို ဖြန်းလေးတစ်ဦးနှယ် ရှက်ရွံ့စိတ်လှုပ်ရှားနေလေသည်။ သို့သော် သူ၏ စိတ်ခံစားမှုများကို မပေါ်ပေါက်စေရန် မျက်နှာတင်းကာ ထိန်းချုပ်ထားလေသည်။
စည်သူစိုးမှာ ထမင်းစားရန် စားပွဲတွင် ထိုင်မိသောအခါ မိခင်ဖြစ်သူ၏ မျက်နှာထားကိုတွေ့ရသောအခါ လန့်သွားလေသည်။ အခြေအနေမှာ မိမိအတွက်ကောင်းနိုင်သော အလားအလာမရှိတော့ဟု မှတ်ချက်ပြု သုံးသပ်ကာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းသွားလေသည်။ သူကြိုးပမ်းစီစဉ်ထားသမျှ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်တော့မည်ကို နှမြောမိလေသည်။
သို့သော် တဆတ်ဆတ် တုန်နေသော မိခင်ဖြစ်သူ၏ ထမင်းပွဲခူးနေသည့် တုန်ယင်နေသော လက်အစုံကိုတွေ့ရသောအခါ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပျော်ရွင်သွားလေသည်။ ဟန်ဆောင် မျက်နှာတင်းထားသော်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ကို လက်တစုံက ဖော်ပြနေသည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုကြောင့် တဆင့်ထပ်တက်ဖို့ စဉ်းစားမိလေသည်။
ထိုကြောင့် ထမင်းစားနေစဉ် ဖိနပ်ကို အသာချွတ်ကာ ခြေထောက်ဆန့်တန်းလျက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူ၏ ခြေကျင်းဝတ် ထမိန်ထဲသို့ မှန်း၍ သူ့ခြေထောက်တဖက်ကို ထဲ့လိုက်လေသည်။ ထိုင်ခုံချင်းလဲ နီးသဖြင့် ကွက်တိရောက်လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ဘာများဖြစ်မလဲဟု ရင်ခုန်မျှော်လင့်နေစဉ် ရုတ်တရက် ရောက်လာသော ခြေထောက် တဖက်ကြောင့် လန့်ကာ အော်မိမတတ် ဖြစ်သွားသော်လည်း သတိချက်ချင်းဝင်ကာ ထိန်းလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုး၏ ခြေထောက်က အတင့်ရဲစွာ အထက်သို့ တရွေ့ရွေ့တက်လာသဖြင့် ရှိမဲ့စုမဲ့ အသိတရားလေးဖြင့် ထိန်းကာ တက်လာနေသော ခြေထောက်ကို မိမိခြေနှစ်ဖက်ဖြင့် ညှပ်၍ ထိန်းလေသည်။
စည်သူစိုးက သူ့ခြေထောက်ကို ရုန်းကာ အထက်သို့ တိုးလေရာ ပေါင်ခြံအတွင်းသို့ ရောက်လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ တခုခုကို မျှော်လင့်ထားသော်လည်း သည်လို အခြေအနေကိုယောင်လို့တောင်မှ အိပ်မက်ထဲထဲ့ မ မက်ဖူးပါချေ။
လင်ယောက်ျား တယောက်လုံးဘေးမှာ ငုတ်တုပ်ထားကာ သားအရင်းဖြစ်သူ၏ လက်ရဲဇက်ရဲ စောက်ပတ် အနိုက်ခံရသော ခံစားမှုမှာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးအတွက် ထမင်းစားရေသောက်လို နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါ။ စားပွဲခင်း အရှည်ဖြစ်ပီး ထိုင်နေသူ ရင်ဘတ်အောက်ပိုင်းကိုပဲ အချင်းချင်း မြင်ရသောကြောင့်သာ တော်တော့သည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသံမထွက်မိအောင် သတိဖြင့်ထိန်း၍ အရေတောက်တောက်ကျကာ ကာမဆိပ်များတက်လာလေသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကတော့ သတိပြုမိပုံမရ။ စည်သူစိုးက ပိုင်နိုင်စွာပင် ခြေချောင်ကလေးများဖြင့်ကလိပေးနေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ လင်မသိအောင် ခိုးစားရသော အရသာကို ခံစားရင်း အကောင်းကြီးကောင်းကာ ပီးလုလုပင်ဖြစ်လာလေသည်။ ဒါကိုသတိထားမိသော စည်သူစိုးက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပေးလေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသံထွက်မညီးညူ မိစေရန် နှုတ်ခမ်းကိုက်အံကြိတ်ရင်း တချီပြည့်ပြည့်ဝဝပင်ပီးသွားလေသည်။
“ဖူး နေမကောင်းဘူးလား ထမင်းသိပ်မစားသလိုပဲ”
“အင်း မောင်ဒီနေ့ စောစောပြန်သွားရမယ် ဟိုမှာ ဈေးဆိုင်နေတယ်”
“ရတယ် စားပီးသွားတော့လေ မောင်ရဲ့”
“သားမင်းလဲစားပီး ထားခဲ့လိုက်တော့ ဆိုင်ကိုဂရုစိုက် ဟို၂ကောင်နဲ့ လွှတ်မထားနဲ့ မေမေက သိပ်ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်ဖူး”
ဟုဆိုကာ စည်သူစိုးမှာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ဆိုင်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။
ထိုနေ့မှစ၍ စည်သူစိုးသည် နေ့တိုင်း ချက်ပြုတ်နေသော အချိန်တွင် ထောက်ပေးခြင်း၊ ထမင်းစားချိန်တိုင်း ခြေထောက်ဖြင့်ပီးအောင် ပွတ်ပေးခြင်းများကို အချိန်မှန်မှန် မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ပေးလေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ အသစ်အဆန်း ကာမခံစားမှုများကို ခံစားနေရသောကြောင့် ဆာလောင်နေသော ရမ္မက်စိတ်များ ပြေပျောက်သလိုလိုရှိလေသည်။
တပတ်ပြည့်သောနေ့တွင် စည်သူစိုးသည် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးအား ရှောင်နေလေတော့သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ချက်ပြုတ်နေသောအချိန် စည်သူစိုး မလာသောအခါ “ဘာလုပ်ဦးမည်လဲ” ဟုတွေးက ရင်ခုန်မိလေသည်။
စည်သူစိုးကား ထမင်းစားချိန်တွင် ဦးဝင်းမောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကာ ဘာမှမသိသလိုပင် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးအား လှည့်မျှပင် မကြည့်ပဲ ထမင်းကို ခပ်သွက်သွက်စားကာ ထွက်သွားလေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စောင့်မျှော်နေသော်လည်း စည်သူစိုးမှာ လုံးဝရှောင်နေတော့လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူမှာ စိတ်ထဲတွင် မရိုးမယွ ဖြစ်လာလေသည်။ တခုခုလိုအပ်နေသလိုလို လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလို ဝေဒနာတရပ်ကိုလဲ ခံစားရလေသည်။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့ ချက်ပြုတ်နေသော အချိန်တွင်
“သားရေ သား ခနလောက်လာပါဦး”
ဟု အော်ခေါ်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးလဲ ဆိုင်လူရှင်းနေသည်မို့ ကြည့်နေသော အောကားကို ပိတ်ကာ အမေဘာများ ဖြစ်လိုလဲ ဟူသော အတွေးဖြင့် နောက်ဖေးမီးဖိုခန်းသို့ ဝင်လာခဲ့လေသည်။ အောက်က ညီတော်မောင်က ဒေါသကြီးကာ ခေါင်းတထောင်ထောင်နှင့်။
မီးဖိုခန်းရောက်သောအခါ စည်သူစိုး ခနငေးမောသွားရလေသည်။ ခဲရောင် အင်္ကျီလက်ပြတ်လေးနှင့် ချည်သားဘောင်းဘီအပွ အနက်ရောင်ကို ဝတ်ဆင်ထားသော အမေမှာ Apronသာ ဖယ်လိုက်ပါက စတိုင်ကျကျမိုက်သွားမည်မှာ သေချာလှပါသည်။ နှုတ်ခမ်းမှာလည်း ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေးဆိုထားသဖြင့် စိုလက်ကာ မြင်ရသော သူ့ရင်ကို ဗလောင်ဆူစေပါသည်။
အမေက နူးညံ့သော အပြုံးလေးပြုံးလျက်
“သားက ဒီရက်ပိုင်း အမေ့ကို ရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ် လုပ်နေတာ စိတ်ဆိုးနေလို့လားကွယ်”
“မဆိုးပါဘူး အမေရဲ့ သားက အမေ့ကို ဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲ”
“မသိဘူးလေ အမေ့နားတောင် မလာတော့ဘူး ဆိုတော့ စိတ်များဆိုးသလားလို့ပါ”
ဟု ပြောပြောဆိုဆို အလှကြီးလှနေသော အမေ့အား ရင်ခွင်ထဲဆွဲ၍ ဖက်လိုက်လေသည်။
သူ၏ ပုဆိုးအောက်မှ မာတောင်နေသော ညီတော်မောင်က အမေ့ ဆီးခုံကို ၀င်ဆောင့်ကာ အလျားလိုက် ကပ်နေလေသည်။ အမေ့ မျက်လုံးလေးများ မှေးခနဲ့ ကျ၍ သွာပြီး ချက်ခြင်း ပြန်ပွင့်လာလေသည်။ သူက အမေ့ ပါးပြင်နှင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံး အနှံ့ နမ်းလိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စည်သူစိုး ခါးကို ပြန်ဖက်ထားကာ သားဖြစ်သူ အနမ်းမိုးရွာခြင်းကို ကြည်နူးစွာခံယူနေလေသည်။ နမ်းလို့ အားရသွားမှ စည်သူစိုးက သူ့မျက်နှာကိုရော လက်တွေကိုပါ ခွာလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုး၏ လက်တွေက ခွာသွားပေမယ့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက စည်သူစိုးကို ဖက်ထားမြဲ ဖက်ထားလျက် ရှိလေသည်။
ထို့ကြောင့် စည်သူစိုးက အမေ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ အမေကက ရုတ်တရက် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများနှင့် သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေပေါ်သို့ ဖိကပ်ကာ ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး စုပ်နမ်းလိုက်လေသည်။ ခဏအတွင်းမှာပင် ပြန်၍ခွာလိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ် မှ လက်များကိုပါ ဖယ်ခွာကာ
ဟု ပြုံးစစ မျက်နှာနှင့် ပြောကာ မျက်လုံးလေးတဖက်ကို မှိတ်ပြလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးမှာ ရင်ဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ မယုံချင်ပေမဲ့လဲ အပျော်ကြီးပျော်ကာ
ဟု ပြောကာ ဆိုင်ခန်းဆီသို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ ထမင်းစားချိန်ရောက်သောအခါ စည်သူစိုးက ခြေထောက်ဖြင့် ပွတ်ပေးသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးက ညုတုတု အကြည့်ဖြင့်ကြည်ကာ သူ့ပေါင်ကြားဆီသို့ ခြေထောက်ဖြင့် သူ့ညီတော်မောင်ကို ပြန်ပွတ်ပေးလေသည်။ သို့သော် အကြံသမားစည်သူစိုးက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပြီးခါနီးအချိန်တွင် ခြေထောက်ကို သိမ်းကာ ထမင်းဝိုင်းမှ ထသွားလေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ မချင်မရဲဖြစ်ကာ ဆတ်တငံ့ငံ့ဖြင့် ကျန်နေခဲ့လေသည်။ ဦးဝင်းမောင် ပြန်ထွက်သွားသောအခါ စည်သူစိုးကြောင့် ဆတ်တငံ့ငံ့ဖြစ်ကာ အဆက်ပြတ်ခဲ့သော ကာမပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းရန် အခန်းထဲသို့ဝင်ကာ ကုတင်ပေါ်လှဲ၍ ကိုယ့်အစိကိုပြန်ပွတ်လေသည်။
စည်သူစိုးသည် အဖေထွက်သွားသောအခါ အမေ ဘာလုပ်မလဲ သိချင်သောကြောင့် အမေရှိရာသို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။
“ဟင်း… ဟင်း …အဟင်း……ဟင်း…”
အမေ့ အခန်းတွင်းမှ ညီးသံများကြားရသောအခါ စည်သူစိုး တယောက် လေချွန်လိုက်လေသည်။ ဒီလို အခြေအနေရောက်အောင် သေချာ အကွက်ရွေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အခန်းတံခါး အသာဟကြည့်တော့ ထင်သည့်အတိုင်း အမေ တယောက် မိမွေးတိုင်း ဖမွေတိုင်းဖြင့် တီဆားပက်ထားသလို ထွန့်ထွန့်လူးကာ ကိုယ့်အစိကို ပွတ်ရင်း လောကကြီးနှင့် ခဏ အဆက်ပြတ်ကာ အကောင်းကြီးကောင်း နေလေသည်။ စည်သူစိုးက ဝတ်ထားသော ပုဆိုးကိုချွတ်၍ ခုတင်ပေါ်ကန့်လန့်လှဲပီး ပေါင်၂ဖက်ကားလျက် ကိုယ့်ဟာကိုပွတ်ကာ အကောင်းကြီး ကောင်းနေသော အမေဖြစ်သူ ပေါင်ကြားသို့ မျက်နှာအပ်ကာ ပွတ်နေသော လက်ကိုဖယ်၍ အစိကို စုပ်လိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ရုတ်တရက် လက်စွဲဖယ်ခံလိုက်ရသောအခါ လန့်သွားလေသည်။ သို့သော် သန်မာသော လက်တစုံက ပေါင်၂ချောင်းကို ကိုင်ကာ နူးညံ့သော နှုတ်ခမ်းတစုံက မိမိ အစိကို လာစုပ်သောအခါ အိပ်ခန်းထဲ လာပြီး သူမကို လက်ရဲဇက်ရဲ ဘာဂျာပေးနေသူမှာ သားဖြစ်သူ စည်သူမှတပါး မည်သူမှမဖြစ်နိုင်ဟု တွေးမိသောအခါ အလိုက်သင့်လေး သားဖြစ်သူပေးသောအရသာများကို ခံယူနေလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးမှာလည်း ပြတ်လပ်နေသော အမေဖြစ်သူကို သားကောင်းတယောက်ပီသစွာ ပြုစုရန် အပီအပြင် ယက်လေတော့သည်။
”အိုး အို အ၊ အ အ အ ဟားးးးးးး ရှီးးးးးဟီးးးးးဟီးးးးးးးဟီးးးးးးးးးး အငှ့ ဟားးးးးးးးးးး ”
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးရဲ့ ညီးညူ သံလေးများ အခန်းထဲမှာ ထွက်ပေါ်နေလေတော့သည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး တကိုယ်လိုး တွန့်လိမ်ကာ စည်သူစိုးခေါင်းကို လက်၂ဖက်ဖြင့် ဖိကာကိုင်ရင်း ကာမလမ်းဆုံးသို့ ရောက်ရှိကာ ပြီးသွားလေတော့သည်။ ပြီးသည့်နောက် စည်သူစိုးက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပေါင်ကို ကားပြီးဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူရဲ့လီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး အမေ့စောက်ပတ်အဝမှာတေ့လိုက်ချိန်တွင်
“ကိုစိုးရေ ကိုစိုး ဒီမှာ ရွှေလာစစ်ပေးပါဦး”
ဟူသော သိန်းစိုး ခေါ်သံကို ကြားလိုက်ရလေသည်။ တော်သေးသည် သိန်းစိုးက အိမ်အဝင်ပေါက်နားကနေ အော်ခေါ်နေလို့။
“အေး လာပြီဟေ့ လာပြီ”
ဟု ပြန်အော်ကာ ပုဆိုးကောက်ဝတ်ရင်း အရေးကောင်း ဒိန်းဒေါင်းဖျက်သော ရွှေပေါင်သူအား စိတ်ထဲမှကျိတ် ကျိန်ဆဲမိလေသည်။
“မာ့မီ သာသားတို ညကျတွေ့မယ်နော် ဒယ်ဒီအိပ်ရင် သားဆီလာခဲ့ပေးပါနာ် မျှော်နေမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို အမေ့နှုတ်ခမ်းလေးအား နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးရင်း ဆိုင်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။ လျှာပေါ်မှာကတော့ အမေ့ စောက်ရေ အရသာကား စိမ့်စိမ့်လေးနှင့် နှခေါင်းထဲမှာ မွှေးမွှေးလေးသင့်ပျံ့နေပါတော့သည်။
ည ၁၁နာရီခွဲ အချိန်တွင် စည်သူစိုး နိုးလာခဲ့လေသည်။ ညကအိပ်ယာစောစောဝင်ခဲ့သည်က ယခုတရေးရခဲ့ချေပြီ။ လိင်မဆက်ဆံခင် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အနံ့ဆိုးများ မရှိအောင် သန့်ရှင်းတာက ကိုယ့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို အဆင်ပြေစေရုံသာမက ဆက်ဆံရတာ ပိုပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ် ဟူသော နောင်တော်ကြီးများညွန်ကြားချက်အတိုင်း ကိုယ်လက်သုတ်သင်ကာ ပြီးသည့်နောက် အမေ့အခန်းဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ အမေ့ အခန်းတံခါး အသာဟကြည့်တော့ အမေက နိုးကာ ထိုင်နေသည်။ ခနအကြာ အမေက ထလာပြီး အခန်းတံခါးဆီသို့ လျှောက်လာလေသည်။ အမထွက်လာသောအခါ သူက ဆီးကြို၍ဖက်ကာ ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီး အမေ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုတ်နမ်းလိုက်လေသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ သာဖြစ်သူဆီ သွားရန် အခန်းတံခါးဖွင့် အထွက်တွင် ရုတ်တရက်ဆွဲဖက်ပြီး အနမ်းခံရသောအခါ လန့်ကာ အော်မိသော်လည်း အသံမထွက်တော့ပါ။ စည်သူစိုးက သူ့နှုတ်ခမ်းတခုလုံး စုတ်နမ်းနေပြီ ဖြစ်လေသည်။ သူကလဲ အငမ်းမရ ပြန်နမ်းမိလေသည်။
“ဗြွတ် ! ! ! “
အနမ်းရှည်ကြီး ဆုံးသောအခါ စည်သူစိုးက သူအား အခန်းထဲသို့ ပွေ့ချီကာ ခေါ်သွားလေသည်။ အခန်းထဲရောက်သောအခါ မွတ်သိပ်ပြင်းပြလွန်းသော အနမ်းမိုးများရွာလေတော့သည်။ နှုတ်ခမ်းချင်း လျှာချင်း အတင်း တိုးထိပွတ်သပ်ကာ မက်မက်မောမော နမ်းလို့ မ၀နိုင်ပဲ နောက်မတွေ့ရမည်ကဲ့သို့ သူ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တအားဖက်ထားသလို သူကလည်း စည်သူစိုးကို တအား ပြန်ဖက်ထားလေသည်။
စည်သူစိုးက နမ်းလျက်ပင် သူ့အင်္ကျီကိုချွတ်လေရာ သူကလည်း စည်သူစိုး အင်္ကျီကိုပြန်ချွတ်ပေးလေသည်။ ၂ယောက်သား ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်တမျှင်မှမရှိပဲ တုံးလုံးဖြစ်သွားသောအခါ စည်သူစိုးက တွန်းလှဲလိုက်လေသည်။ ထိုနောက် အပေါ်မှတက်ခွကာ သူ၏နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအား ဖိကပ်ကာ စုတ်နမ်းပါတော့သည်။ စည်သူစိုး လက်နှစ်ဖက်က လက်ညိုးနှင့်လက်မသုံးကာ နို့သီးခေါင်းလေးများ ချေပေးနေပြီး သူ့နို့၂လုံးအား အုပ်ကိုင်ထားလေသည်။ သူ့ခြေထောက်များကလည်း စည်သူစိုးခါးအား ညှပ်ကာ စည်သူစိုးလီကြီးက သူ၏ စောက်ပတ်ပေါ်တွင် အပြားလိုက် ကပ်နေလေသည်။ စည်သူစိုးက ခါးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်လေရာ စောက်စိမှစ၍ စောက်ပတ်ကွဲကြောင်းအတိုင်း လီးကြီးက လွှတိုက်နေလေသည်။ ထိုအတိုင်းခနကြာသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ တဏှာစိတ်များကြွသထက်ကြွကာ ရာဂမီးလျှံများ လောင်မြိုက်လျက် စည်သူစိုးကို တင်းကြပ်စွာဖက်တွယ်ကာ စောက်ပတ်ထဲမှလည်း အရေများ ပွက်ခနဲ့ ပွက်ခနဲ့ထွက်လာလေသည်။
ထိုအခါ စည်သူစိုးက နမ်းနေရာမှ ခွာ၍ နို့များကို ပြောင်းစို့လေသည်။ နို့တလုံးကိုစို့နေချိန်တွင် လက်တဖက်က နို့တလုံးကိုချေပေးနေကာ ကျန်လက်တဖက်၏ လက်ညိုးနှင့် လက်ခလယ်၂ချောင်းပူးကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ ပါးစပ်ထဲသို့ ထဲ့ပေးလေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ပို၍ စိတ်ကြွလာကာ စည်သူစိုးလက်နှစ်ချောင်းအား အားရပါးရစုတ်လေတော့သည်။
အတန်ကြာ နို့စို့ပြီးသောအခါ စည်သူစိုးက လျှာကိုခပ်တောင့်တောင့်လေးလုပ်ကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ရင်ညွန့်မှ ဆီးစပ်သို့ ဆွဲချကာ ယက်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် အရေရွဲရွဲစိုနေသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ကို လျှာဖြင့်အပြားလိုက်ယက်ပါတော့သည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ တင်းမထားနိုင်တော့ပဲ တချီပြီးသွားလေသည်။
စည်သူစိုးက မရပ်ပဲ စောက်စိကို သရက်စေ့စုပ်သလိုစုပ်ကာ လက်၂ဖက်က ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ နို့သီးခေါင်းလေး၂လုံးကို ချေပေးလေရာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ ညီးသံလေးများပေးကာ ကာမစိတ်များပြန်ကြွလာလေသည်။
“ဟင်းးး အင်းးး ဟင်းးး ဟင်းး”
စောက်ပတ်မှာလဲ အရေများလိုက်ကာ စိုရွဲလာလေသည်။ စည်သူစိုး အခြေအနေကို အကဲခတ်နေသူဖြစ်ရာ ဒီအချိန်သည် လိုးရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိကာ စောက်စိစုပ်နေခြင်းကို ရပ်လိုက်လေသည်။
“ဟင်း အင်း ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ ဆက်စုပ်ပေးပါ သားရယ်”
“မေ့မေ့ကို ချစ်မလို့ပါ မေမေ”
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် စည်သူစိုးက ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး ပေါင်ကြားတွင် နေရာယူကာ သူ့လီးကြီးနှင့် စောက်ပတ်ဝကို တေ့လိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ကြီးမှာ လီးအထိအတွေ့ကို ခံစားသိရှိသည့်အလား ခုံးထလာလေသည်။ စောက်ပတ်အတွင်းထဲမှလည်း တစုံတခုကို တောင့်တသည့်အလား အတွင်းသားများက တဆစ်ဆစ်နှင့် ရှုံ့ချီပွချီ ဖြစ်လာလေသည်။ စည်သူစိုးက ခါးတလှုပ်လှုပ်ဖြင့် နှဲ့ကာ ဖြေဖြေချင်းသွင်းလေတော့သည်။
“အား ကျွတ် ကျွတ် သားဖြေးဖြေးနော်”
ဟုဆိုကာ သွင်းရင်းဖြင့် အဆုံးထိဝင်သွားလေသည်။ စည်သူစိုးက အထုတ်အသွင်း ဖြေးဖြေးခြင်း လုပ်ကာ လိုးပါတော့သည်။ အချက်၂၀ကျော်သောအခါ
“သား မြန်မြန်ဆောင့်ပါတော့ အမေခံနိုင်ပြီ”
ဟုဆိုသဖြင့် စည်သူစိုးက စက်သေနတ်ပစ်သလို အသားကုန်ဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ ထိုသို့ လိုးနေရင်းစည်သူစိုးက
“မေမေ သားလိုးတာ ခံလို့ ကောင်းလား”
“ပြောပြပါ မေမေရာ သားက ကြားချင်လို့ပါ မေမေ မဖြေရင် မဆောင့်တော့ဘူး”
ဟု ပြောပြောဆိုဆို ဆောင့်ချက်ကို လျော့ချလိုက်လေသည်။ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စည်သူစိုး၏ ညစ်ကျယ်ကျယ် လုပ်ပုံကို သဘောကျကာ
“ကောင်းတယ်စည်သူရယ်ကောင်းတယ် သားလီးက မင်းအဖေထက်ကြီးတော့ ခံလို့ အရမ်းကောင်းတယ်မင်းအဖေထက်သာအောင် လိုးပြစမ်းသားလေး မင်းအဖေ ကျယ်အောင် လိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ မေမေ စောက်ပတ်ကို မင်းလီးကြီးနဲ့ လိုးလိုက်စမ်း”
ဟု ပိုပိုသာသာ တမင် စိတ်ကြွအောင် ပြောလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ ပြောပြီးနောက် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးမှာ စောက်ပတ်ထဲမှ အရေများပိုလိုက်လာလေသည်။ စည်သူစိုးမှာ အမေ့ စကားကြားပြီး စိတ်ကြွသွားကာ မီးကုန်ယမ်းကုန်လိုးပါတော့သည်။
ခနကြာသောအခါ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ စည်သူစိုးကို တင်းကျပ်စွာဖက်ကာ ပြီးသွားလေသည်။ တချိန်မှာပင် စည်သူစိုး လီးထဲမှ သုတ်ရည်များကလည်း ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ထဲသို့ အရှိန်ပြင်းစွာ ပန်းထွက်သွားလေသည်။
ထိုညမှစကာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးသည် ညတိုင်း ဦးဝင်းမောင်အိပ်ချိန်တွင် စည်သူစိုးနဲ့ လိုးလေတော့သည်။
သို့သော် အခါ တစ်ညသောအခါဝယ်
ဦးဝင်းမောင် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေရာမှ လန့်နိုးလာလေသည်။ ဘေးမှ မိန်းမဖြစ်သူကို ကြည့်တော့လဲ မရှိ။ အပေါ့အပါးသွားနေသည် ဖြစ်တန်ရာ သူလဲ အပေါ့အပါးသွားရန် အိပ်ယာထကာ အခန်းထဲမှထွက်လာလေသည်။ အခန်းအပြင်ရောက်သော် ညီးညူ သံတခုကို သားတော်မောင် အခန်းဆီမှ ကြားရလေသည်။ ဘာများဖြစ်နေလဲ ဟူသော စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် အခန်းဆီသို့ လာချိန်တွင်
“အား အ ကောင်းလိုက်တာသားရယ်”
ဆိုသော စကားသံများကြောင့် ခြေလှမ်းတုံ့သွားလေသည်။ ခြေသံမကြားအောင် အသာသွား၍ စည်သူစိုးအခန်းတံခါး အသာဟကြည့်လေသော် ဦးဝင်းမောင် ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်သွားလေသည်။ မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကား ဝင့်ဝင့်ဖူးက လေးဖက်ထောက်လျက် ခုတင်ပေါ်မှာ စည်သူစိုးက နောက်က ဝင့်ဝင့်ဖူး စောက်ပတ်ထဲ လီးသွင်းကာ လိုးနေသော မြင်ကွင်းပင်။
မြင်နေရသော အခြေအနေသည်ဦးဝင်းမောင်၏သွေးသားများကိုထူးထူးခြားခြားပင် လှုပ်ရှားသွားစေလေသည်။မယုံနိုင် အံ့အားသင့်သောစိတ်တို့ကလွမ်းမိုးနေသဖြင့်ထိုသို့သွေးသားတွေလှုပ်ရှားသွားမှုကိုဦးဝင်းမောင်သတိမထားမချေ။ အမေနှင့် သားလိုးနေသော အခြေအနေကို ဦးဝင်းမောင်
ဘယ်တုန်းကမှယောင်လို့တောင် မစဉ်းစားမိခဲ့ချေ။ ခုတော့ဘာလုပ်ရမည်ကို မသိတော့ချေ။
“ကောင်းတယ် သားလေး လိုးစမ်းအမေ့ကို”
ဦးဘမောင် ခေါင်းကျိန်းလေပြီ။အဝေးသို့ထွက်ပြေးလိုက်ချင်သည်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားသောခံစားမှုတခုကဆွဲငင်ထားသလို ဖြစ်နေလေသည်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မိန်းမဖြစ်သူက တခြားသော ယောက်ျားတယောက်နှင့်လိုးနေကာ လိုးနေသူကလည်း ကိုယ့်သားအရင်းဖြစ်နေသော အခြေအနေမှာ သမရိုးကျ အခြေအနေမဟုတ်ပါ။ သူတို့ ၂ယောက်ကြည့်ရသည်မှာ လိုးနေတာကြာပြီဖြစ်လောက်လေသည်။
ဦးဝင်းမောင် ဒေါသတွေ တရိပ်ရိပ်ထွက်လာလေသည်။ တခြားတဖက်တွင်လည်း ကာမရမ္မက်များထူးခြားစွာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်နိုးကြားလာလေသည်။အသိစိတ်ကမိန်းမနှင့် သားလုပ်သူတို့၏ လူ့ဘောင်အပြင်ဘက်က ဖောက်ပြန်မှုကိုဒေါသထွက်နေသည်။ မသိစိတ်က လိုးပွဲကြည့်ရင်း ရာဂစိတ်များ နိုးကြားနေလေသည်။ ထိုကာမရမ္မက်စိတ်၏စေ့ဆော်မှုကြောင့်ပင်ဦးဘမောင် လီးကြီး တောင်မှန်းမသိ တောင်လာလေသည်။ဒေါသအချောင်းချောင်းထွက်နေသော ဦးဝင်းမောင်သူ့လီးကြီးတောင်လို့တောင်နေမှန်းမသိသေးပါ။
မသိစိတ်ထဲကရာဂဇောဖြင့် သားနှင့် မိန်းမဖြစ်သူလိုးပွဲကို ကြည့်ရင်း လီးကြီးကိုအလိုလိုဆုပ်ကိုင်မိကာ ဂွင်းထုမိသည့် အခြေအနေသို့ဟရောက်မှန်းမသိရောက်သွားလေသည်။
ပုဆိုးကိုစလွယ်သိုင်းကာ လီးချောင်းကြီးကို အပီအပြင်ဆုပ်ကိုင်ပြီးဂွင်းနာနာထုနေမိလေသည်။
စည်သူစိုး ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်ခါသွားသော ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ ဖင်ဖြူ ဖြူ ကြီးများကိုကြည့်ကာ
မိမိမှာ လီးပြန်တောင်လာသည်ကို သတိပြုမိကာ ဦးဝင်းမောင် ဝမ်းသာသွားလေသည်။ ယောက်ျားတယောက်အဖို့ လီးမတောင်နိုင်ခြင်းမှာ ရှင်လျက်နှင့် သေခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ အိပ် စား လိုး ဟူသော အရာသုံးပါး၌ တခုခုဆုံးရှုံးရလျှင် ဘဝပျော်ရွှင်မှု ဆိတ်သုန်းရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ဦးဝင်းမောင်မှာ အပျော်ကြီးပျော်ကာ သားဖြစ်သူနှင့် မိန်းမဖြစ်သူကို အပြစ်မမြင်တော့ပဲ ကျေးဇူးတင်မိလေသည်။ ထိုအပြင် သည်လိုချောင်းကြည့်ရသည့် ခံစားမှုမျိုးနှင့် ကိုယ့်မိန်းမ၏ ဖုံးကွယ်ထားသော ကာမခံစားမှုများကို မြင်ရသော အခြေအနေကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိကြောင်း သတိပြုမိလေသည်။ အစထဲက ပွင့်လင်းသူပီပီ သားဖြစ်သူနှင့် ၂ယောက်ညှပ်ကာ ဝင့်ဝင့်ဖူးကို လိုးလျှင် ဘယ်လိုနေမလဲ ဟူသော အတွေးတို့လည်း ဝင်ရောက်လာလေသည်။
ထိုကြောင့် ရေအမြန်ဆေးကာ မိမိအခန်းဆီသို့ ပြန်၍ အိပ်နေလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးနှင့် ဝင့်ဝင့်ဖူး၏ လိုးပွဲကြီးက အရှိန်မသေသေးပဲ ဆက်လက် ကပြလျက်ရှိလေတော့သည်။
“ရှင် မောင်ပြောလေ ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ”
စည်သူစိုး ရှေ့တွင် သေချာ ဝင့်ဝင့်ဖူးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောကာ ခေါ်ခဲ့လေသည်။ စည်သူစိုးမှာ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ထူးဆန်းသော အပြုအမူကြောင့် တခုခုတော့ တခုခုပဲ ဟုအတွေးဝင်ကာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဗျာများနေမိလေသည်။ သူနှင့် အမေ့ကိစ္စကို အဖေသိပါက မိုးမီးလောင်တာထက်ဆိုးမည် ဖြစ်ကြောင်း တွေးမိကာ စိုးရိမ်စိတ်တို့ဖြင့် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေလေသည်။ အတန်ကြာ စောင့်ကြည့်သော်လည်း ပြန်ထွက်မလာသဖြင့် အဖေတို့အခန်းဆီသို့ သွားကာ ချောင်းကြည့်လေသည်။
အခန်းကမြင်ကွင်းကိုတွေ့သောအခါ စည်သူစိုးမှာ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရလေသည်။ မြင်ကွင်းကား အဖေက အမေ့ကို ခုတင်ပေါ်လေးဖက်ထောက်ကာ နောက်မှ လိုးနေသော မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ ဝမ်းသာစရာ အချက်ကား ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်မောင် လီးပြန်တောင်လာခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ တဆက်ထဲမှာပင် အမေနှင့် လိုးချင်မှ လိုးရတော့မည်ဟူသော အသိကလဲ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတော့သည်။
“အား အ အ ထွက်ကုန်ပြီ မောင်ရဲ့ ပြီးသွားပြီမောင်”
“အား ကောင်းလိုက်တာ ဖူးရာ ဖူး ဖူး”
ဟူသော ရေရွှတ်မြည်တမ်းသံများနှင့်အတူ ဦးဝင်းမောင်နှင့် ဒေါ်ဝင့်ဝင့်ဖူးတို့ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့်ပြီးသွားလေသည်။
“မောင် ဘာဆေးတွေသောက်လိုက်လို့ လီးပြန်တောင်လာတလဲဟင်”
“ဘာဆေးမှမသောက်ဘူး မင်းနဲ့ သားနဲ့ လိုးတာကြည့်ပြီး လီးတောင်လာတာဟေ့”
“ခုမှ ရှင်မနေနဲ့ ဟိုတံခါးပေါက်က ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ကောင်လဲ လာခဲ့ ငါအကုန်သိပြီးပြီ ငါတို့မိသားစု သွေးမကွဲပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြမယ် အဲ့ဒါကို မင်းတို့သဘောတူလား ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ မောင် အကုန်ခွင့်လွှတ်တယ်”
ဦးဝင်းမောင်မှာ ဝေ့ဝိုက်မနေပဲ ဒဲ့ အပေါ်ဆီးကနေ ပြောကာ အမှတ်ယူလိုက်လေသည်။ မထူးလဲ တားမရမည့် အတူတူ မိသားစု သာယာရေးကို ရှေ့ရှုကာ နားလည်မှုယူလိုက်လေသည်။
စည်သူစိုးမှာလည်း အဖေနှင့်ပေါင်းကာ လိုးပွဲကြီးဆင်နွဲရမည့် အသိကြောင့် ရင်ခုန်နှုန်းမြန်ကာ လီးကြီးတထောင်ထောင်နှင့် အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာလေသည်။
“လာသား မင်းမေမေကို ဖေ့ဖေ့ရှေ့မှာ အပြတ်လိုးပြစမ်း”
ဟုပြောရင်း အမေ့ပေါင်ကြားတွင် နေရာယူကာ လီးကြီးကို စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ကာ စိန်စီနန်းရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက် ကပြတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြရင်း နားပါရစေတော့ခင်ဗျာ။
“” စောက်ရည်ယိုယို စိမ်းစိမ်းစို “”